निषेधाज्ञाको असर ! काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि, परिवारको बिजोग (भिडियो) – Sapana Sanjal
१ बर्ष अगाडि मात्र दोलखाबाट उपचारको शिलशिलामा काठमाडौ आएका हुन डिल्ली बहादुर कार्की । दोलखा निबासी डिल्ली बहादुर केही बर्ष अगाडि रुखबाट खसेर आफनो ढाड भाच्न पुुगे त्यसपछि उनी उपचारका लागि यहा आए । आएको एक बर्षमा लकडाउनको चपेटामा परेर अहिले के खाउ के लाउ भाको छ ।
न त आफू बसेको घरको भाडा तिर्न सकेका छन न त दुुई छाक खानानै । गाउमा खेती किसानी गर्दागर्दै रुखको हागो लाछिएर करिब २० फिट तल खस्दा यस्तो अवस्थामा आईपुगे । काठमाडौ आएपछि पनि यसैका लागि करिब १२—१३ लाख खर्च गरे डिल्लीले । घर बारी सबै बेचेर ७ लाख रिन लगाएर यतिसम्म अवस्थामा पुगेका छन ।
३ छोरीका बुवा बनेका डील्ली भन्छन छोरीले दिसा पिसाब स्याहार्दा आफैलाई बि.ष खाएर मरम जस्तो लाग्छ भन्छन । श्रीमतीले लकडाउन अगाडि महिनाको ५ हजार आउने जागिर गर्थिन तर त्यो पनि अहिले छैन र छोरीले फेन्सीमा काम गर्थिन त्यहाको पनि अहिले आश हरायो भन्दै छोरी भक्कानिईन । १५ बर्षकी छोरी ९ कक्षामा पढदापढदै बाबुको यो अवस्था भएपछि पढाई पनि छोडिन । रुमभाडा नदिएको पनि २ महिना भयो अब सडकमा बास होला भन्दै परिबारनै भक्कानिए ।
Prevकाँग्रेस उपसभापति गच्छदारकी पत्नीको मृत्यु
Nextनिषेधाज्ञाको असर ! काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि, परिवारको बिजोग (भिडियो)
सरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएको बिद्यालय की १५ वर्षीय बालिका को कोरोना ले लीयो ज्या’न